Indian man wins bet but doctors have to remove bottle from his rectum
၀င်တယ်၊ မ၀င်ဘူး !!! လောင်းမလားကိုယ့် လူ....
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကန်ဒွါမတ္တရာပရာဒေ့ ဒေသမှ ဆရာဝန်များဟာ အရက်သမားအချင်းချင်းအလောင်းအစားပြိုင်
ပွဲတစ်ခုတွင် ရူပီး ၁၀၀၀ ( ပေါင်စတာလင် ၁၂.၂၀၊အမေရိကန် ၁၈ ဒေါ်လာခန့် ) အနိုင်ရခဲ့ သည့် အမျိူး
သားတစ်ဦး၏ မစင်စွန့် ရာအပေါက် မှ ၁၈၀ မီလီ အရွယ်ရှိ ပုလင်းတစ်လုံးအား ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပေးခဲ့ ရပါ
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ က ဆရာဝန်များအနေဖြင့် အမည်မဖေါ်ပြခဲ့ 
သည့် အဆိုပါဇိုးသမား ငနဲသားမှ ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်အနောက်အပေါက်ထဲသို့ပုလင်းတစ်လုံး လုံးဝင်အောင်
ထိုးသွင်းခဲ့ တာ ( လောင်းကြေးစားကြေးအနေဖြင့် ) ဖြစ်ပါတယ်...
အလောင်းအစားလုပ်ရာတွင်အနိုင်ရခဲ့ သော်လည်း အဆိုပါအမျိူးသားမှာ များမကြာခင်သတိလစ်မေ့ မြော
နောက်တစ်နေ့ သတိပြန်လည်ရခဲ့ ရာတွင် ပုလင်းအားပြန်လည်ညှစ်ထုတ်ခဲ့ သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ သ
ဖြင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ ရောက်သွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
သူလောင်းခဲ့ တဲ့ ပုလင်းကလည်း အရက်တွေပါတဲ့ အရက်ပုလင်းဖြစ်ပါလိမ့် မယ်...
ဒါကြောင့် သူမူးပြီးမှောက်သွားခဲ့ တာ...
" လူနာအားစစ်ဆေးခဲ့ ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ သူ့ ကိုခွဲစိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပြီး တစ်နာရီလောက်ကြာ
အောင် ပုလင်းကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ ရပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ မစင်စွန့် တဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနဲ့ ဆီးအိမ်က
တော့ ထိခိုက်ပျက်ဆီးသွားခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ဒေါက်တာ ဂါဒိဆင်းအူဘေဂျာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါအမျိူးသားဟာ အရက်စွဲနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အိတ်စ်ရေးပုံအရ ပုလင်းဟာ
၎င်း၏ အစာဟောင်းအိမ် ( အူလမ်းကြောင်း ) အတွင်းရောက်ရှိနေတာ တွေ့ ရှိခဲ့ ကြရပါတယ်...
သူ့ အဖြစ်နဲ့ ဆင်တူ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးမှ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေကြရတဲ့ အမတ်မင်း
သူတို့ လည်းနိုင်တော့နိုင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ရှေ့ ဆက်ရမှာလည်း ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်နေရှာတယ်...
Doctors in Khandwa, Madhya Pradesh, surgically removedaquarter bottle (180 ml) of liquor from the rectum ofaman who had allegedly inserted it to winawager of Rs 1000 (£12.20, $19.43) with fellow boozers.
"After examining the patient, we decided to performasurgery which lasted for nearly an hour and removed the bottle," Dr Gurdeep Singh Ubeja said. "But by that time it has damaged the anus area as well as urinary bladder," he said.
Posted by peter kyaw | at 2:27 AM |
Labels: news: deccanherald.com